Foni Yezvishongedzo Fekitori - China Foni Yezvishongedzo Vagadziri uye Vatengesi
Isu tiri nyanzvi yekugadzira uye mutengesi wenhare mbozha muChina uye tanga takazvipira kupa OEM / ODM masevhisi kune vepasirese vatengesi, zvigadzirwa, makambani nevanozvigovera. Yedu hombe chigadzirwa mhando dzinosanganisira dzakagadzirwa nharembozha makesi, vanobata nharembozha, nharembozha, tambo dzefoni, nharembozha yekuchenesa, nezvimwe. Kubva pamabasa akasiyana siyana kuenda kuzvinhu, zvinosanganisira PVC, silicone, simbi, microfiber, TPU uye PC zvigadzirwa. Mazhinji enhare mbozha nenhumbi dziripo haibhadharise fizi yeforoma. Yakasarudzika nhare mbozha neako akasarudzika dhizaini, logo, yakavanzika chitambi, uye kurongedza. Ongorora huwandu hwedu hwemakesi, vanobata mhete, nhare dzefoni uye nezvimwe.
Kiredhiti Kadhi Nhare Mira Mubati
Aluminum Runhare Mira Vabati
Silicone Nhare Dzenhare
Yakapetwa Aluminium Mira Vabati